> Resource > Lugood > Sida loo Muuji Song Lyrics for Lugood iyo iPod
Marka qof dhagaysan hees, sida caadiga ah isaga ama iyada doonaa gabyi in lyrics ah haddii loo baahdo. Si kastaba ha ahaatee, lyrics waa mid ka mid ah muujinta maqan oo dhan versions of Lugood. Haa, waa sax, in aad edit karaa lyrics ee uu Hel Info item, laakiin sida aad u soo bandhigo karo, waa qayb ka mid adag. Ma macna kuu inaan sugnaa Apple oo ay dayactir ku Lugood ah muuqaalada lyric awood badan? Dabcan MA! Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida aad kara muujiyaan lyrics song in aad Lugood iyo iPod.
Muuji Lyrics for Lugood
Si aad u soo bandhigaan lyrics on Lugood aad, waxaa jira qaar ka mid ah laga heli karaa fur-in ay tan u sameeyaan. Mid ka mid ah waa visualizer Lugood ah, Cover Version ah oo soo bandhigay farshaxanka cover album gabayga ah haatan u ciyaara iyo sidoo kale lyric, haddii uu jiro. The lyrics of wadada lagu soo bandhigi doonaa on top of daboolka farshaxanka album ah, halka magaca artist iyo music horyaalka waxaa lagu qori doonaa hoose (sida lagu muujiyey in shaashadda hoose).
Cover Version waa labada diyaar u Windows iyo Mac. Waxaad kartaa halkan kala soo bixi . Way fududahay in la soo dajiyo, kaliya CoverVersion ah (CoverVersion.dll) si Library> Lugood> Lugood koronto-tago ee buugga guriga aad ku Mac. Haddii kale iyaga guurto folder fur-tago hoostiisa ku rakibo folder Lugood ee Windows. Si aad u aragto lyrics ee Lugood, u tag View> Visualizer> CoverVersion .
Fiiro gaar ah : Dabool Version ha qabtee lyrics mana audio internetka. Waxa kaliya ee soo bandhigay lyrics in horay loo gundhig in wadada audio. Haddii aad jeclaan doonaa si lyrics internetka, waxaad isku dayi laga yaabaa in soo dejiya Lugood Lyrics.
View Lyric Gacanta
Lugood kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto lyrics ee gacanta. Just xaq-guji song gaarka ah ee Lugood dooro Hel Info (toobiye keyboard waa Command + I). Markaas, waxaad tagtaa Lyrics tab si aad u eegto lyrics ah.
View Lyrics on iPod
Waxaa kaloo laga yaabaa xiiso u arkaysid lyrics aad iPod. Dhab ahaantii, waxa kale oo aad u fudud inta uu heeso ka heshay lyrics ah gundhig. Ka dib markii ay kaga dayanayaan in aad iPod songs , raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
1. Start ciyaaro kasta oo gabaygan oo aad ku daray lyrics.
2. dhufatey Center button si joogta ah ilaa aad ka aragto lyric ku iPod.
Halkan amarka fursadaha marka aad riix Center button haddii ay jiraan tahay album ama lyrics:
Play xaaladda> Scrubber> Album Art> Lyrics / Description> Rating
Tani waa xaaladda songs aan lahayn farshaxanka album iyo xogta lyric.
Play xaaladda> Scrubber> Rating
Sida loo dib iPad in Lugood 12 Mac iyo Windows Kombiyuutaro
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Xiriirada ka ah ee kaabta File Lugood